Yusuf Garaad: Weerarka Baarlamaanka maxaa Xiga?
Weerarka Baarlamaanka maxaa Xiga?
Villa Somalia, Maxkamadaha, Baarlamaanka!
Allaha u naxariisto dadka maanta lagu dilay weerarka Baarlamaanka. Ehelkoodana Samir iyo Imaan Allah ha ka siiyo. Waa waddaniyiin naftooda u huray daafaca Qarannimada Soomaaliya. Ka sokow wixii qoysaskooda loo taro, waa in astaan magacyadoodu ay ku qoran yihiin oo lagu xasuusto lagu dhejiyaa Baarlamaanka meesha laga soo galo.
Inta ku dhaawacantay weerarka waxaan Allah uga baryayaa in uu caafiyo.
Waxaan taageero u dirayaa Guddoomiyaha iyo Xildhibaannada Baarlamaanka ee naftoodu maanta halis ku gashay in ay gutaan howshooda Qaran.
Marka XIgta, 14-kii bilood ee na dhaafay Shabaab waxay ku guuleysatay in ay weerarto dadna ku disho saddexda hey’adood ee ugu sarreeya Qarank: Fulinta (Villa Somalia), Sharci Dejinta (Baarlamaanka) iyo Garsoorka (Maxkamadaha).
Waxaa habboon Madaxweynaha iyo inta ku dhow dhow in ay si niyad ah isu weydiiyaan meesha ay wax ka qaldan yihiin. In ay fahmaan in ay u baahan yihiin in ay la tashadaan Madaxdii dalka soo maamuli jiray iyo kuwii amniga gacanta ku hayay.
Madaxweynaha waxaa la gudboon in uu safarkiisa soo gaabiyo oo hadduusan Caawa ku laaban caasimadda uu berri subax ka quraacdo. Waxaa habboon in isaga oo waajibkiisa gudanaya, uu haddana u isticmaalo xaaladdan mid isu soo dhoweysa isaga iyo Xildhibaannada doonaya in ay xilka ka qaadaan.
Cambaareyn waxba ma xallineyso. In afka lagu aargoosto oo la yiraahdo Shabaab weerar fuleynimo ayay soo qaadday ma badbaadineyso ummadda. Kaba darane in wixii dhacay been laga sheego micno ma soo kordhineyso, waana been abuur iyo marin habaabin ummadda oo lafteedu dembi ah. Weerarradii hore ka dib sidii loo dhaqmay oo kale in loo dhaqmo ma keeneyso in weerarro soo socda la baajiso.
Mar haddii saddexdii hey’adood ee ugu sarreysay Qaranka la weeraray waxay u baahan tahay in la odoroso, lana xuuraansado meesha ku xigta ee Shabaab damacsan yahay in uu weeraro. Iyada oo aan talada laga saareyn in ay dhici karto in saddexdii hore ay u weerareen mid ka mid ah ay mar kale dib u booqdaan.
Dadka tuhunka gelinaya Madaxweynaha iyo saaxiibbadiis, waxaan u sheegi lahaa in sida aanan anigu uga warqabin cidda weerarka ka dambeysa oo kale aanay iyaguna uga warqabin. Midda kale cidda sheegatay in lagu daayo ayay ku habboon tahay. Caqliguna wuxuu na siinayaa in Madaxweynuhu xataa dayacaad ula kas ah aan lagu eedeyn karin, sababta oo ah hooygiisii iyo xafiiskiisii ayaa tan maanta dhacay mid ka darani ay ka dhacday. Marka dhibka dhacay yaan looga sii darin tuhun iyo been faafis yaan dadka lagu kala dilin.
Posted by Yusuf Garaad at 17:04:00
Deeq Jarmalku siinayo Puntland
Madaxweynaha Vs Xildhibaanno
Laba Laab mise Laba Jibbaar?